Ku soo dhawoow Pack | Managed isolation and quarantine
Being in managed isolation › Entering managed isolation › Welcome pack | He mōkī whakatau ... › Ku soo dhawoow Pack
Xarunta karantiilka la maareeyo ee dadka dib ugu soo noqda New Zeaaland.
Ku soo dhawoow Pack Somali [PDF, 1.7 MB]
Waxaanu kaaga mahad naqaynayaa ku biiritaanka kumanaanka kale ku ilaalinta badbaado bulashadda. Dedaalkaagu waxa naga caawiyaa si looga hortaggo COVID-19 inuu ku faafo gudaha New Zealand.
Nau mai, haere mai: soo dhawow
Kia ora, dib ugu soo dhawow New Zealand, way fiican tahay inaad gurigaaga haysato.
Marka COVID-19 safmarku ku sii socdo inuu ku sii kordho adduunka inagu xeeran, gudaha Aotearoa New Zealand waan adkaynay oo hore u xadidnayn saamaynta COVID-19 gudaha bulshooyinkeena. Tan waxaa ka mid ah bandowga wadanka oo dhan oo adag iyo ku shaqaynta nidaamkayaga Digniinta COVID-19 Heerka 4.
New Zealand hadda waxay leedahay dhowr xaaladood oo COVID-19 waxaanu isku deyaynaa inaan sidaas ku ilaalino. Si ay nooga caawiso sii wadista badbaadada ah ee wadanka, waxaanu hirgelinay nidaamka Karantiilka La maareeyo iyo Karantiilka (MIQ) xadkayaga si looga hortaggo xaaladah cusub ee COVID-19 ee gelida bulshaddayada.
Dhawaan kasa soo noqoshada goob safar caalami ah macnaheedu waxa weeye waxaad ugu jirtaa khatar inaad qaado fayraska oo suuragal ahaan aad dib ugu soo celiso New Zealand. Tan macnaheedu waxa weeye waxaad u baahan doontaa inaad tagto xarunta la maareeyo ee karantiilka ugu yaraan 14 maalmood.
Haddii ay jirto sabab lagu rumaysan yahay inuu ku gaadhay COVID-19 waxaa lagu gelin doonaa xarunta karantii,ada ugu yaraan 10 maalmood ka dib bilowga astaamaha COVID-19 ama laga bilaabo taariikhda baadhitaankaaga. Waa inaad ka saafi ahaataa astaamaha COVID-19 ugu yaraan 72 saacadood ka hor inta aanad tegi karin.
Joogitaanka gudaha karantiilka la maareeyo waa shuruud sharci ah oo waafaqsan Jawaabta Caafimaadka Dad waynaha COVID-19 (Xadka Hawada) Amarka 2020 ee dhaqan galay 11.59 habeeno 22 Juun 2020.
Xarumahan waa huteelada halka lagaa siin doono taageero xoogan joogitaankaaga oo dhan. Waxaan sameeyn doonaa dhammaan waxaan karno joogitaankaaga sida ugu farxada badan sida suuragalka ah. Inta aad halkan joogto fadlan u naxariiso huteelka, caafimaadka iyo shaqaale kale, oo raac tallooyinkooda, hagitaaanka ama tilmaamaha.
Warqaddan waxay leedahay macluumaadka aad heli doonto muddada joogitaankaaga sida badbaado loo joogo, iyo waxa aad u baahan tahay inay dhacaan ka hor inta aanad ka tegi karin xarunta. Waxaa loo cusboonaysiiyaa si caadi ah oo loo beddelaa waxa ala sameeyn karaa muddada joogidaada.
Shaqaalaha goobta u heelan waxay halkan u joogaan si ay kuu caawiyaan. Fadlan la hadal iyaha haddii aad qabto su’aalo ama walaacyo ku saabsan qayb kasta oo joogitaankaaga ah.
Kia kaha waadna ku mahadsan tahay waqtigaaga.
Waa inaad la xidhiidhaa wixii su’aalo ah marka koowaad kooxda goobta walaacyo. Waxaa jira melo kale oo aad tegi karto wixii macluumaad ah iyo faahfaahinta xidhiidhka:
websaydka karantiilka la maareeyo iyo karantiilka: www.miq.govt.nz
COVID-19 websaydka: www.covid19.govt.nz(external link)
macluumaadka caafimaadka COVID-19: www.health.govt.nz(external link)
Macluumaadka dheeraadka ah ee arrimaha socdaalka la xidhiidha, ay ku jiraan nidaamka ka reebida xadka iyo xaaladaha socdaalka shakhsiga ah, fadlan booqo websaydka Laanta Socdaalka New Zealand taas oo si joogta ah loo cusboonaysiiyay: www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19(external link)
Haddii aad rumaysan tahay qof inaanu raacayn sharciyada ama uu u dhaqmayo qaab ay dhici karto inuu faafiyo COVID-19 fadlan uga warbixi kooxda goobta – waxaad sidoo kale uga warbixin kartaa dhib kasta bogga www.covid19.govt.nz/compliance(external link)
Waxaad leedahay xaqa aad kula tashato qareen kharashkaaga (arag macluumaadka ku saabsan xuquuqaha Lifaaqa saddex).
Waa maxay sababta loo tagto karantiilka la maamulo
COVID-19 waxaa lagu faafin karaa qof ilaa qof. Ka soo noqoshada dhawaan goob caalami ah macnaheedu waxa weeye ugu jirida khatar sidista fayraska. Degdeg uma bukoonaysid oo astaamahu waxay qaataan wakhti inay soo baxaan.
Joogida xarunta karantiilka la maareeyo ilaa ugu yaraan muddo 14 maalmood ah waxay noo oggolaadaan inaan ku karantiimayno haddii ay dhacdo inaad dilaacinayso cudurka. Waxay si wanaagsan nooga caawisaa xakamaynta faafida suuragalka ah waxayna ka dhigaysa adiga iyo qoyskaagaa inaad badqabtaan.
Muddada wakhtigan laguuma oggolaan doono inaad ka tagto xarunta. Xusuuso:
Ku jirida karantiilka waa tallaabo feejignaan oo xili gaaban ah si looga ilaaliyo adiga, kuwan kuu dhow adiga iyo bulshaddeena COVID-19.
Waxaa sharci ahaan lagaaga baahan yahay inaad joogto xarunta karantiilka la maareeyo ugu yaraan 14 maalmood, si loo dhammaystiro qiimaynta caafimaadka oo loo xaqiijiyo inaad khatar yar ugu jirto inaad qaado ama gudbiso COVID-19 ka hor inta aanad gelin gudaha bulshadda.
Astaamhan waxay waafaqsan yihiin COVID-19 tegida xarun karantiilgooni ah.
Waa maxay karantiilka la maareeyaa?
Tiro xarumo ah gudaha New Zealand ayaa dowladdu ka dhistay si loo maareeyo karantiilka dadka ka soo noqonaya wadamada dibada. Tani waa tallaabada xad kayaga si loo xaqiijiyo dadka soo gala New Zealand wakhtigan inaanay u keenin COVID-19 ee wadamada dibada ah bulshadda.
Karantiilka la maareeyo iyo xarumaha karantiilku waa badqabka waxana ku jira taageero badan oo adiga loogugu talagalay iyo isku imaanshaha qoyska. Waxay hoy u yihiin dadka soo noqdo ee lagu qiimeeyay sidii khatar hoose inay qabaanCOVID-19 markay yimaadaan New Zealand, tusaale ahaan kuwa ka gudbay baadhitaanka caafimaadka aan lahayn astaamaha COVID-19. Xarumaha karantiilka la maareeyo waa huteelo, ay shaqaaleeyaan koox xirfad yaqaano caafimaad, huteelo iyo shaqaalaha dowladda.
Dadka badankoodu waxay ku qaadan doontaa 14 maalmood gudaha xaruna karantiilka.
Ilaa hadda in ka badan 50,000 oo qof ayaa u soo maray dhexda karantiilka la maareeyo iyo karantiilka oo ugu yimid si badbaado leh bulshadda.
Goormaad tegi kartaa?
Waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku jirto xarunta karantiilka ugu yaraan ilaa 14 maalmood. Tani waxay bilaabantaa wakhtiga ka soo degto New Zealand, iyo marka aad gashay xarunta karantiilka la maareeyo haddii aanad raacin shuruudaha inaad xidhato maaskareetada wejiga oo aad ilaaliso kala fogaanta jidhka.
Haddii xubinta qoyska ama qofkan taageerada ah la siiyay ka reebida inuu qolkaaga kuugu yimaado, ama uu la xidhiidho qof kasta oo qaba COVID-19, karantiilkaada 14 maalmood ah ayaa bilaabmi doonta.
Ugu badnaan dhammaan xaaladaha baadhitaanka aan laga helin ee COVID-19 iyo xaqiijinta dhakhtarka caafimaadka inaad khatar hoose ugu jirto inaad qaado ama gudbiso COVID-19 waxaa loo baahan yahay ka hor inta aanad ka tegin xarunta.
Khatarta hoose ee qabida ama gudbinta COVID-19 waxaa ku jira xaqiijinta aad hayso:
Ku jiray karantiilka la maareeyo ugu yaraan 14 maalmood.
Ma lihid qandho 38°C ama ka sare.
xaaladaha oo dhan, aan laga helin COVID-19.
Waxaa lagaaga baahan karaa inaad joogto ilaa wadarta 28 maalmood haddii aad diido baadhitaanka COVID-19 ama dhakhtarka caafimaadku kaaga fekeri maayo inaad tahay khatar hoose.
Waa inaad buuxisaa heerka qiimaynta si aad uga tagto xarunta oo aad u hesho warqadda xaqiijinaysa inaad dhammaysatay karantiilka la maareeyo. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad buuxiso Foomka ka Bixida Karantiilka La maareeyo. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad buuxiso Foomka ka Bixida Karantiilka La maareeyo.
Ula socoshada caafimaadkaaga si caadi ah
Markaad ku jirto karantiilka la maareeyo waxaad heli doonta abaadhitaanka caafimaadka caadiga ah. Baadhitaanada iyo baadhida waxay muhiim u tahay fayo qabkaaga adiga iyo kuwa kale ee kugu xeeran. Sidoo kale waxay naga caawisaa inaan ku siino daawaynta caafimaad haddii aad qaaday fayraska
Fadlan si buuxda ula shaqey shaqaalaha. Waxay hlkaas u joogaan adiga oo waxay hubiyaan baadhitaanada caafimaadku inay waxtar leeyihiin.
Waxaa lagaa baadhi doonaa labba jeer COVID-19
Maalinta 3: Baadhitaankii u horeeyay ee COVID-19 waxaa ilaa 3 sida celceliska wakhtiga badanka dadka uu kaga muuqdo caabuqu ka dib marka ay qaadaan waa 5 maalmood, oo waxaanu ku xisaabtanaa 2 maalmood oo safar ah.
Maalinta 12: Ka dib waxaanu baadhnaa ilaa maalinta 12 marka caabuqu ay ku qaadato in dheer inuu kaga muuqdo dadka qaar. Baadhitaanka labbaad waa sidoo kale hal ka mid ah baadhitaanada aanu isticmaalno si aanu go’aan uga gaadhno haddii qofku khatartiisu yar tahay oo uu kaga tegi karo xarunta ka dib 14 maalmood.
Baadhitaanku waxa uu ku lugleeyahay dheecaan laga qaado xaga dambe ee sanka. Tani waxay noqon kartaa xooga aan raaxo lahayn laakiin lama garanayo inay waxyeelo sababto. Waxay qaadataa wax ka yar daqiiqad si loo soo qaado muunada.
Arag lifaaqa hal wixii ah macluumaadka ee baadhitaanka iyo natiijooyinka.
Haddii aad diido baadhitaanka COVID-19 ama tixgelin khatar yar, joogitaankaaga waxa uu noqon karaa ilaa 28 maalmood wadar ahaan.
Waa inaad raacdaa tilmaamaha madaxa caafimaadka ee caafimaadka ama madaxa ilaalinta caafimaadka muddada joogitaankaaga. Sidoo kale baadhitaanka COVID-19, waxaa sidoo kale lagaaga baahan doonaa inaad qaadato qiimaynta caafimaadka. Haddii la waydiiyo qalabka ilaalinta gaarka ah (PPE) sida maaskareetada wejiga wakhti kasta muddada joogitaankaaga, waa inaad sidaas samaysaa.
Firii lifaaqa mid waxaa lagoogu talagalay macluumaadka baarista (bogga 22).
Caawin ayaa mar walba helaya
Waa muhiim inaad daacad ka tahay caafimaadkaaga muddada joogitaankaaga gudaha karantiilka la maareeyo. Tani waa qaabka ugu fiican baahiyaha caafimaadkaaga iyo fayo qabka waa la maarayn karaa. Kooxda shaqaalaha caafimaadka had iyo jeer waxaa laga heli karaa xaruntaada.
Haddii aa dareemayso inaadan fayo qabin, joog qolkaaga oo telefoon u dir kooxda goobta. Waxay ku talin doonaan waxa la qaban doono marka xigta.
Haddii ay mar un soo baxdo inta lagu jiro kaa soo baxaan astaamaha COVID-19 ee qandhada, qufaca, neef gaabnida ama hunguri xanuunka, fadlan xusuuso inaad joogto qolkaaga oo u oggolow shaqaalaha goobta inay isla markaaba ku ogaadaan telefoonka. Waxay ku uhabbayn doonaan adiga in uu ku qiimeeyo xirfad yaqaanka caafimaadka goobtu.
Marka aad ku jirto karantiilku way adkaan kartaa, waa tallaabo muhiim ah in New Zealand la badbaadiyo oo lagu tunto COVID-19. Karantiilka iyo la socodka caafimaadkaaga, waxaa dka ciyaaraysaa door muhiim ah oo waxaad gaadhi kartaa labbadaba ujeedooyinkan.
Xaaladaha laga shakiyay ee COVID-19
Haddii qof kasta oo ku jira xaruntaada laga shakiyo inuu qabo cOVID-19, waxaa lagu waydiisan doonaa inaad joogto qolkaaga ilaa si kale la sheego mooyee. Waxaanu qiimaynaynaa inay tani ahaan doonto mid welwel leh laakiin badbaadadaadu waa mudnaanteena.
Marka xaalada COVID-19 gudaha xarunta la xaqiijiyo, dadka ku lugta leh waa la karantiimeeyaa ka hor inta aan si badbaado leh loogu beddelin xarunta karantiilka. Nadiifinta xarunta ee dheeraadka ayaa sidoo kale la sameeynaya.
Xusuuso inaad u jirsato masafada jirka oo 2 mitir ah kuwa kale muddada aad joogto markaas si la isaga ilaaliyo in xidhiidh dhow lala yeesho qof ka baxsan inta kugu xeeran.
Adeegyada gudaha xarumahaaga
KU JIRA GURMADKANA
Dhammaan xarumaha waxay bixin doonaan qorshaha gurmadka degdega ah ee aad raacayso xaalada degdegaah. Fadlan la qabso laftaada iyada oo sidaas ku samee codsiga shaqaalaha goobta.
Waa dembi in si laog yahay loo sababot digniita dabka been abuurka ah, oo in sidaas la sameeyo waxay keeni doontaa dacwad ku oogid. Joogtey masafada jirka oo2 mitir dadka kaleoo xidho maaskareetiga lagu siiyay adiga.
Kooxda shaqaalaha caafimaadka waxaa laga heli karaa xaruntaada. La xidhiidh soo dhawanta huteelka oo waydiiso kalkaalisada inay kaa caawiso walaacyadaada caafimaadka. Shaqaalaha caafimaadka sidoo kale waxay awoodi doonaan inay ka caawiyaan dawo kasta iyo shuruudaha daawo qorida.
Quraacdaada, qadada iyo cashada waa la bixin doonaa. Cunto kasta oo dheeraad ah waxay u baahan doontaa in lacag la bixiyo.
Kooxda goobta ogaysiis haddii aad qabto wax xasaasiyadaha cuntada ah ama xaaladah caafimaadka u baahan cuntooyinka gaarka ah, sida cudurka Crohn.
Waxaa jiri kara doorashooyinka onlaynka ah ee lagu dalbado cuntadda oo ka dib laguugu soo dirayo. Kala hadal kooxda goobta wax ku saabsan ikhtiyaarada alaab keenista magaaladda.
ADEEGYADA TELEFOONKA GUDAHA QOLKA (TELEFOONKA LAYANKA AH) IYO WI-FI
Wicitaanka gudaha, ee u dhxeeya qolalka iyo adeegyada huteelka, waa bilaasha.
Wicitaanka dibada waxaa lagu soo dalacaa qiimayaasha huteelka (daqiiqadiiba). La hadal shaqaalaha huyeelka si awoo dloo siiyo adeega.
Wi-Fi waa bilaash. La hadal shaqaalaha hoteelka wixii faahfaahin ah. Waxaanu ku talinaynaa abka wicitaanka internatka ku salaysan sida FaceTime, Messenger iyo WhatsApp haddii aad doonayso inaad iska ilaaliso kharashk telefoonka.
FARMASIILAYAASHA MĀORI LANYKA TELEFONKA BILAASHKA AH
Ngā Kaitiaki o Te Puna Rongoā o Aotearoa - Ururka Farmasiilayaasha Māori (MPA) waxay leeyihiin laynka telefoonka bilaashka ah si ay uga jawaabaan su’aalaha uu Odayga ama qoyska ballaadhan qabaan ee ku sabasan dawooyinkooda.
Soo wac 0800 664 688 oo ka tag faahfaahintaada xidhiidhka. Farmasiilaha Māori yaa dib kuu soo waci doona wixii ah wada sheekaysiga 24 saacadood gudahood.
La hadal shaqaala caafimaadka goobta haddii aad u baahan tahay talo caafimaad oo degdeg ah.
Adeegyada dhar dhaqista ayaad helaysa inta aad joogto. La hadal shaqaalaha hoteelka ama kooxda goobta ee adeegyada gaarka ah ee xaruntaada.
Haddii adiga ama qof ku jira inta adiga ‘kugu xeeran’ oo u baahan caawiyo, fadlan la hadal kooxda goobta ama wac soo dhawayna hoteelka.
Ku joogida badbaadiyo iyo caafimaad qab
Joogitaanka karantiilka la maareeyo, waxaad ku biiraysaa dagaalka ku lidka ah COVID-19, joojinta faafida, jebinta silsilada iyo badbaadinta nolosha.
Markaad ku jirto karantiilka, waa muhiim in la raaco sharciyada aasaasiga ah si loo caawiyo inaad badbaado ku joogto iyo caafimaad. Dhaqdhaqaaqa dibada qolkaaga waa la oggol yahay keliya qaab adag oo la maamulo. Fadlan tixgeli oo raac borotokoolada, hagitaanka iyo tilmaamaha shaqaalaha xaruntaada.
Ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo inta badan (ugu araan 20 ilbirqsi) oo si fiican u qalaji ama si joogta ah u nadiifi gacmahaaga.
Ku qufaca oo ku hindhis suxulkaaga ama ku dabool afkaaga iyo sanka tiishka. Isla markaaba ku rid daasada qashinka.
Iska ilaali taabashada wehigaaga, ay ku jiraan indhahaaga, sanka, iyo afka haddii gacmahaagu aanay nadiif ahayn. Sagxadaha waxay lahaan karaan dhibco caabuq wata.
Ha ugu gelin qolka hoteelka qof aan ku jirin kuwa kugu xeeran adiga.
Keliya dhexgal dadka kugu xeeran adiga.
Mar walba joogtey masafada 2 mitir dadka kale laga reebo kuwan ku jira inta adiga ‘kugu xeeran’ (qoyskaaga/ lamaanaha).
COVID-19 waxaa lagu faafiyaa dhibco yaryar, markaas ka fogow kuwa kale oo raac ilaalinta wanaagsan ee caafimaadka adiga iyo kuwa kale wixii ah inay faafto COVID-19.
Xidho maaskareetiga wejigaaga waqti walba taas oo lagu siiyay marka aad joogto dibada qolkaaga, ama haddii qof u baahdo inuu soo galo qolkaaga wixii ah dayactirka ama nadiifinta.
Macluumaadka dheeraadka ah ee qabashada badbaadada ah ee maaskareetiga waxaa laga heli karaa bogga 27 iyo 28 ee dhokumentigan.
Ku jimicso gudaha qolalkaaga halka ay suuragal tahay.
Socodka la kormeeray ama kullamada jimicsiga heerka hoose waxaa fududeeyo shaqaalaha goobta.
Haddii aanad miyir qabin waa inaad la xidhiidhaa kooxda caafimaadka goobta si loo falan qeeyo doorashooyinka wixii ah jimicsiga.
Haddii lagu jimicsado dibada, fadlan xusuuso si aad u Ilaaliso fogaanta jidhka ah 2 mitir ee kuwa kale oo xidho maaskareetiga lagu siiyay adiga.
Digniinaha qiiqa waxaa daari kara boodh, uumi, qiiq iyo qiiq kale iyo uumi bax.
Sigaarka ha cabbin ama sigaarka korontada ah qolalkaaga ama dhisida wakhti kasta.
Wax haku karin qolkaaga. Sokoyadda ha buuxin dhaafinin.
Ha saarin shukumaanada ama dulsaarin waxyaabaha olola kuleelayaasha si ay u qalalaan.
Haddii digniinta dabku yeedho, raac nidaamka ka daad guraynta guriga oo dhegayso tilmaamah shaqaalaha hoteelka iyo maamulka.
Xayiraadaha waa lagu dabaqaa
Joogitaanka xarunta karantiilka la maareeyo waa tallaabo muhiim ah si loo badbaadiyo New Zealand oo laga ilaaliyo gudbinta dheeraadka ah ee COVID-19. Waxaa jira qaybo sharciyo ah iyo hagitaanka waxa aanad samayn karin marka aad joogto gudaha xarunta.
Waxaa lagugu dhiiri gelinayaa inaad joogto qolkaaga ilaa ay baahi kuu hayso inaad baxdo mooyaane. Tani waxay kaa badbaadin doontaa inuu ku gaadho cudurku oo waxay ka hortagtaa faafida COVID-19.
Haddii aad u baahato inaadbaxdo, xusuuso inaad xidhato maaskareetooyinka wejiga lagu siiyay adiga. Isticmaalka dib u isticmaalka maaskareetooyinka iyo daboolada kale ee wejiga lama oggola marka aad joogto karatiilka ama xarunta karantiilka.
MA OGOLA IN LA SOO BOOQDO
Qoyska iyo saaxibadu kuma soo booqan karaa si looga hortaggo faafida COVID-19.
Hoteelku waxa uu bixiyaa Wi-Fi bilaash ah. Kula xidhiidh qoyskaaga iyo saxiibada kale ee wada xidhiidhka sida wicitaanka telefoonka ama isticmaalka abka sida Zoom, SKYPE, iwm.
SAWIRKA IYO DUUBISTA FIIDIYOWGAWAA LA MAMNUUCAY
Laguuma oggola inaad sawiro qaado, filim ama duubida maqalka ah ee aagaga gaarka ah xaruntan.
Tan waxaa ka mid ah kalkaalisooyinka baadhidooda iyo qolalka caafimaadka, iyo hawlagalda iyo meelaha amniga.
Haddii shaqaalahu ay u baahan yihiin qolkaaha, fadlan tixgeli gaar ahaanshahooda oo demi filim kasta ama duubid kasta oo maqal ah oo ha qaadin sawirada.
SUUQWEYNAHA IYO WAX IIBSIGA ONLAYNKA AH
Haddii aanad ka tegi karin xarunta, laakiin aad dalban kasto sheegayda onlaynka ah oo aad u dirto xaruntaada. Waxaa jira doorashooyin badan oo suuqweynahaonlaynaka, ama dukaanada kale ee maxaliga ah oo aad heli karto.
Waxaanu qiimaynaynaa inaad saaxiibo leedahay ama qoysas kuwaas oo soo dira alaab adiga marka aad halkan joogto.
Si loola hadlo soo dhawaynta hoteelka ama kooxda kale ee goobta si loo arko waxa uu yahay nidaamku si loo oggolaado sheeyada in la keeno.
Waxaa jira xiisaha dad waynaha ee sareeya udaha karantiilka la maareeyo iyo xarumaha karantiilka. Saxaafada yaa kula soo xidhiidhi karaa adiga oo aday ku jirtaa haddii aad la hadasho iyaga.
Fadlan xusuuso saxafiyiintu inaanay soo geli karin hoteelka.
Haddii aad aqbasho waraysiga, tixgeli doorashooyinka fog sida telefoonka ama wicitaanka fiidyaha.
XUSUUSNOW: Waxaanu ku wada jirtaa tan oo waxaanu ballan ku qaadaynaa in aan ka dhigno joogitaankaaga mid raaxo leh sida suuragalka ah.
Waxaa jira qaabab nalagu ogaysiinayo haddii aad qabto dhibaatooyin ama walaacyo muddada joogitaankaaga. Marka koowaad la hadal kooxda goobta. Waxay halkan u joogaan inay caawiyaan.
Waxaad sidoo kale ka warbixin kartaa qof kasta oo aad rumaysan tahay inaanu raacayn sharciyada, ama u dhaqmaya qaab ay dhici karto inuu faafiyo COVID-19.
Booqo: www.covid19.govt.nz/compliance(external link)
Xanaanynta caafimaadkaaga maskaxda iyo fayo qabka
Kuwan waa wakhtiyo adag oo caqabad leh.
Haddii adiga ama kuwan kugu xeeran ee aad ka walaacsan tihiin sid aaad dareemayso ama fayo qabkaaga, waxaa jira macluumaad iyo agabka la heli karo si laguu caawiyo inaad maskax ahaan fayo qab ahaato oo aad ka gudubto karantiilka.
Haddii aad dareento inaanad la qabsanayn, waa muhiim inaad kala hadasho xirfad yaqaankaaga caafimaadka. Qodobkaaga koowaa waa kalkaalisada goobta ama shaqaalaha caafimaadka.
Soo wac ama fariin qoraal ah u dir 1737 ka taageerida werwerka, walbahaarka ama fayo qabka maskaxda. Adeegan waa bilaasha, oo waxaad soo waci kartaa wakhti kasta, 24 saacadood maalintii, 7 maalmood todobadkii.
Ka wada gudbistu waxay leedahay tilmaamo dhan oo ah is daryeelida iyo qoyskaaga muddada safmarka COVID-19.
Sparklers at Home waa gabka onlaynka ah ee waalidka, ay ka buuxaan hawlo maad ah oo taageera fayo qabka ardayda dugsiga hoose iyo dhexe.
Mentemia i ap-ka lagala soconayo, lagu maareeyo oo lagu horunariyo fayo qabkaaga maskaxda iyaddoo la dejinaayo hadafyada maalinlaha ah iyo raad raacida horumarkaaga.
Melon waxay bixisaa ilaha caafimaadka iyo agabka is wayci gelinta si loo caawiyo maaraynta dareenkaaga fayo qabka. Waxay sidoo kale ku taageeraan dadka dhalin yarada ah, fiidyowyo, tilmaamo, xaashiyaha shaqada, tilmaamah saxaafada bulshadda la wadaago iyo kooraska yar ee maaraynta walbahaarka.
Joogteynta la socodka waa kooras daawaynta onlaynka oo ku baraysa xirfadaha iyo farsamooyinka lagu maareeyo werwerka, walbahaarka iyo ilaalinta fayoq abkaaga iyo ka qoyskaaga inay dhabada saxd ah ku jiraan.
Websaydka Wasaarada Caafimaadka waxaa ku jira macluumaad badan iyo ilo si loo taageero fayo qabkaaga maskaxda, siiba macluumaadka ku saabsan ururada ku caawin kara haddii aad u baahato taageero.
Taageerada in la dareemo ka badqadka rabshada
New Zealand waxay u qaadataa rabshada qoyska iyo galmada si adag. Qofna waa in aanu baqan ama aanay waxyeelo u gaysan kuwa kale. Caawinta waxaa loo heli karaa dhammaan dadka waa wayn iyo carruurta.
Haddii ad khatar degdeg ah ku jirto ka wac booliska 111. Haddii aanad hadli karin, dhegayso doorashada si aad u garaacdo 55 – tani waxay toos kuugu gudbin doontaa booliska.
Sax ma ahankhadka caawimada rabshada qoyska
Khadka macluumaadka rabshada qoyska 0800 456 450 waxa uu bixiya amacluumaad oo waxaa la heli karaa todoba maalmood todobaadkii, laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa 11 habeenimo.
Badbaado ah in la hadlo
Khadka tooska ah ee waxyeelada galmada ee qaranka ee laga heli karo telefoonka iyo internatka.
Wac 0800 044 334
Waxaa jira caawimo la heli karo haddii aad u baahan yahay macluumaadka lama huraanka ama adeegyada taageerda, ay ku jiraan codsashada caawimada dhaqaalaha (iyo taageerada kale ee aad u baahan tahay).
Wasaarada Horumarka Bulshaddu waxay u caawin kartaa qaabab badan oo kala duwan iyo xaalado. Waxaad sidoo kale waydiin kartaa shaqaalaha goobta inay ku tixraacaan. Waa fikrad wanaagsan in la tixgeliyo dookhyadaada goor hore oo joogitaankaaga ah markaas caawimada waa la heli karaa haddii aad u baahan tahay iyada marka aad ka tagto xarunta.
Haddii aad u baahan tahay shaqo marka aad ka tagto xarunta, waxaa jira agab onlayn ah oo ku xidha loo shaqeeyayaasha dadka raadinaya shaqo.
Marka aad hesho shaqo aad xiisaynayso waxa ajirta caawimada aad ku codsato ama aad kula hadasho loo shaqeeyaha. Waxaa jirta sidoo kale caawimada la heli karo ee tababarka iyo waayo aragnimada shaqada, oo leh CV gaaga, warqadda shaqo dalbashada ama buuxinta codsiyada.
Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo:
www.jobs.govt.nz(external link) ama
Qof kasta waxa uu u qalmaa inuu haysto meel badbaado ah oo caafimaad qab uu ugu noolaado.
Haddii aanad haysan meel aad tagto marka aad ka baxdo karantiilka waxaa jiri karta caafimo la heli karo si loo heli meel aad ku noolaato. La xidhiidh Wasaarada Horumarka Bulshadda riqc@msd.govt.nz
Macluumaad kasta oo kale fadlan booqo: www.workandincome.govt.nz(external link)
Haddii aanad haysan shaqo ama aanad shaqayn karin mustaqbalka dhow, adiga waxaad awoodi kartaa inaad hesho gunnooyin ama caawimada dhaqaalaha.
Macluumaadka dheeraadka ah ee ku saabsan taageerada dhaqaalaha aad heli karo, booqo check.msd.govt.nz(external link)
Waxaa jiri karta caawimo laguu heli karo haddii aad caawimo uga baahato kharashyada safarka si aad guriga u gaadho. Waa inaanad ku socon lacag gunno ah. Iimayl noogu soo dir riqc@msd.govt.nz
Ka yarahay 18
Haddii aad ka yar tahay 18, waxaanu kaa caawin doonaa adiga iyo qoyskaaga/waalidka/masuulka si looga dhigo joogitaankaaga mid raaxo leh oo badbaado ah. Waxaa jir karta shuruudo gaar ah oo la heli karo, tisaale ahaan si awood loo siiyo shaqada dugsiga.
Waxaad ka soo geli kartaa Home Learning TV tvnz.co.nz on-demand(external link). Waxaa jira 300 oo qaybood oo leh casharo loogu talo galay dhammaan kuwa goor hore waxbaranaya iyo kuwa da’da dugsiga. Waxaa jira sidoo kale heerka waxbarashadda iyo ilaha fayo qabka learningfromhome.govt.nz si ay kuu taageeraan adiga iyo qoyskaaga muddada karantiilka.
Sidoo kale waaad codsan kartaa inaad lahaato waalid ama masuul kuu yimaada gudaha karantiilka la maareeyo dhexda nidaamka ka reebida. Macluumaadka ku saabsan ka reebida ee bogga 20 xidhmadan.
Xarunta karantiilka la maamulo
Dowladdu waxay soo ceshanaysaa qayb kharasyada maaraynta karantiilka si loo wadaago xamuulka dhaqaalaha qaab si xaq ah u muujiya dheefaha labbadaba dad waynaha New Zealand inay lahaadaan nidaam adag, iyo kuwan ka taga oo soo gala wadanka.
Ku soo dalacida kharashka waxa uu bilaabmaa saacada 12.01 habeenimo 11 Ogosto 2020.
Imisa ayuu qiimaheedu noqon doonaa?
$3,100 ka koowaad ama qofka kaliya ee guriga gudahiisa (haddii uu yahay qof wayn ama ilmo yar) oo leh $950 qof kasta oo wayn oo dheeraad ah iyo $475 ilma kasta oo dheeraad ah (3-17 sanoo jir, lagu daray) wadaagaya qolkaas, dhammaan GST lagu daray.
Ma jiro kharash wax ka yar da’da 3 jir haddii ay joogaan gudaha qolka oo ay la joogaan qof kale. Haddii aad masuul ka tahay inaad bixiso, waxaa lagu soo dalaci doonaa qolkiib. Fadlan arag www.miq.govt.nz/charges faahfaahina dheeraadka ah.
Kumwaa ka masuul ahaan doona bixinta?
Dadka reer New Zealand ee booqanaya New Zealand wax ka yar 90 maalmood, iyaddo ay u qalmaan ka dhaafida ama ka reebida mooyaane. Dadka reer New Zealand waxaa loo qeexaa sidii muwaadiniinta New Zealand (ay ku jiraan kuwan jooga Cook Island, Niue iyo Tokelau) iyo dadkaniica degnaanshaha haysta fiisa, iyo muwaadiniinta Ustaraaliya iyo dadka si joogta ah u degen ee caadi ahaan degen gudaha New Zealand.
Dadka reer New Zealand, sida sare lagu qeexay, ee ka tagay New Zealand ka dib 12.01 subaxnimo 11 Ogosoto 2020.
Dadka fiisaha ku meelgaadhka ah haysata, iyaddoo ay yihiin dad caadi u degen gudaha New Zealand mooyaane laga bilaabo 19 Maarso 2020.
Qof kasta oo gelaya ka reebida xadka sidii shaqaale muhiim ah ama shaqaale caafimaad oo muhiim ah waa uu bicin doonaa. Haddii anad hubin cida bixin doonta kharashka, fadlan la xidhiidh loo shaqeeyaha.
Adiga ayaa bixinaya lacagta, waxaad u baahan doontaa inaad soo dejuso oo buuxiso Kharashka Dhijitaalka iyo Foomka Ka dhaafida bogga www.miq.govt.nz/charges. Marka aad buuxiso tan, fadlan iimayl u soo dir fees@miq.govt.nz
Waa maxay ka reebanaanta iyo ka dhaafida?
ka reebanaanta waa dadka aana bixinayn karantiilka la maareeyo ama karantiilka kharashkeeda.
Ka dhaafida dadka ka masuulka ah in kharash lagu soo dalaco karantiimadooda la maareyeo ama karantiilka, laakiin codsan kara inay helaan qayb ama dhammaan kharashka laga saaray.
Kumaa ka reeban kharashka?
Dadak reen new Zealand ee degi doonaa New Zealand muddo ka badan 90 maalmood haddii aanay ka tegin New Zealand taariikhda ama ka dib 12:01 habeenimo 11 Ogosto.
Lamaanayaasha, carruurta iyo masuulada sharciga ah ee iskaran timaynaya ama la safraya qof ka xor ah kharashyada bixinta (iyaddoo ay geliyaan ka reebida shaqaalaha xadka ee muhiimka ah mooyaane).
Qof jooga New Zealand oo gala karantiilka la maareeyo ee daryeelka qofka ka xorta ah isbeddelada.
Qaxootiga, ay ku jiraan dadka dacwoonaya, dadka ilaashan iyo codsadayaasha ku jira qayta gaarka ah ee qaxootiga ee dhibanayaasha rabshada qoyska, marka ay galaan New Zealand wakhtigii u horaysay.
Qof kasta oo gelaya New Zealand ka dib wareejinta caafimaadka ee hawada lagu keeno ama badbaadada xaga bada ah.
Bukaanka safaraya iyaddoo qayb ka ah Wasaarada Caafimaadka Wa akharash aad U badan ama Wasaarada Arrimaha Dibada iyo Ganacsiga New Zealand Qorshaha Daawaynta Caafimaadka.
Muwaadiniinta New Zealand caadi ahaan degen Cook Islands, Niue ama Tokelau oo ugu soo safraaya New Zealand daawaynta caafimaadl.
Muwaadin New Zealand ah caadi ahaan degen Cook Islands, Niue ama Tokelau, uu ka soo safraya wadan saddexaad dhex maraya New Zealand (joogaya wax ka yar 90 maalmood) si uu ugu noqdo Cook Islands, Niue ama Tokelau (joogaya ugu yaraan 90 maalmood).
Dadka loo soo mastaafuranayo New Zealand, ee loo qeexay sidii “dembiilayaan soo noqonaya” sida waafaqsan Dembiilayaasha Soo noqonaya (maamulka iyo Macluumaadka) Xeerka 2015 iyo muwaadin kasta oo New Zealand ah oo laga soo mastaafuriyo Ustraaliya.
Shaqaalaha dublamaasiyiinta iyo qusuliyada, ay ku jiraan qoysaskooda, iyo wakiilada dowladda rasmiga ah wadan ajnabi ah.
Haddii aadu malaynayso inaad ka xor tahay kharashyada, fadlan buuxi Foomka Kharashka iyo Ka dhaafida xaga www.miq.govt.nz/charges ee muujinaya sababta aad xor u tahay. Marka aad buuxiso fadlan iimayl u dir fees@miq.govt.nz.
Kumaa codsan kara ka dhaafida?
Qof kasta oo ku jira karantiilka la maareeyo ayaa codsan kara ka dhaafida kharashyada. Codsi kasta waxaa looga fekeri doonaa qaab xaalad xaalad ah.
Ka dhaafida waxaa la heli doonaa xaalada dhibaatada dhaqaale iyo duruufaha kale ee ay ku jiraan:
Qof u dhashay New Zealand oo gelaya karantiilka sababtoo ah waxay ka tegeen New Zealand si ay u raacaan qof ku soo noqonaya New Zealand kaas oo naafo ah ama aan safri karin keligii.
Qof u baahan inuu u safro oo ka safro New Zealand si uu helo daawayn caafimaad.
Asbaabaha kale ee naxariita leh, ay ku jiraan qofka u safaray si uu booqdo qof aad u jiran ama qaraabo dhow oo dhimanaya ama xaadida aadka ama geerida (haddii uu joogo New Zealand ama dibada).
Macluumaadka dheeraadka ah ee ku saabsan cida codsan karta ka dhaafida iyo waxa lama huraanka au ah dhokumentiga taageerada waxaa looga baahan doonaa inay taageeraan codsiga, fadlan booqo www.miq.govt.nz/charges.
Sida loo codsado ka dhaafida
Si loo codsado ka dhaafida, waxaad u baahan doontaa inaad soo dejuso oo buuxiso Kharashka iyo Foomka Ka dhaafida ee bogga www.miq.govt.nz/charges. Marka aad dhammaysto tan fadlan iimayl u dir fees@miq.govt.nz. Fadlan xaqiiji inaad lifaaqdo dhokumentiga taageeraya ee lama huraanka ah si loo taageero codsigaaga.
Dadka u baahan inay bixiyaan karantiilka la maareeyo kharashkeeda waxay heli doonaan qaansheegta ka dib markay ka tagaan karantiilka la maareeyo oo guud ahaan waxay haystan doonaan 90 maalmood si ay u bixiyaan. Qaansheegta waxay sharaxi doontaa sid aloo bixiyo. Dadku ma bixin doonaan kharash xaga xarunta karantiilka la maareeyo.
Macluumaad kasta oo dheeraad ah oo ku saabsan kharashyada karantiilka la maareeyo.
Fadlan hubi www.miq.govt.nz/charges
Ka tegida xarunta karantiilka ka dib 14 maalmood
Waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku jirto xarunta karantiilka ilaa ugu yaraan 14 maalmood.
Diyaarso qorshaha safarka
Waa muhiim inay kuu cadahay waxa ku saabsan halka aad tegayso marka aad dhammaysato joogitaankaaga xarunta karantiilka la maareyeo. Shaqaalaha goobta waxay ku waydiin doonaa qorshahyaashaada safarka ka hor inta aanad tegin.
Caddee halka aad tegayso marka xigta iyo sida aad ku gaadhayso halkaas
Tani naga caawisaa inaan fahamno wakhtiga aad baxayso, markaas waxaanu habbayn karnaa hubinta bixida iyo si wanaagsan waxay kuu taageertaa adiga muddada bixitaankaaga.
Usafarida garoonka diyaarada waa la heli karaa
Waxaanu dib kuugu celin doonaa garoonka diyaarada aad ka soo gashay, haddii aad rabto, iyaddoo aad si kale sheegto mooyaane.
Waxaad u baahan doontaa inaad ka habayso xarunta gaadiid raacaaga ilaa hoygaaga xiga
Haddii aanad awoodin inaad habbayso safarkaaga, fadlan la xidhiidh shaqaalaha gooobta wixii talo ah.
Nala hadal haddii aanad hubin goobta aadu socoto Haddii aanad
lahayn meel habboon oo aad u socoto, fadlan la hadal shaqaalaha goobta kuwaas oo awood u yeelan doono inay kuw aaciyaan ama u gudbi wakaaladaha Dowladda kuwaas oo caawin kara.
Fadlan ku wargeli kooxda goobta haddii hoygaaga ama qorshayaasha safarku ay isbeddelaan marxalad kasta muddada joogidaada. Arag lifaaqa 2 wixii macluumaad dheeraada ah.
ka bixida xarunta
Ugu badnaan dhammaan xaaladaha baadhitaanka aan laga helin ee COVID-19 iyo xaqiijinta dhakhtarka caafimaadka inaad khatar hoose ugu jirto inaad qaado ama gudbiso COVID-19 waxaa loo baahan yahay ka hor inta aanad ka tegin.
Joogtay karantiilka la maareeyo ugu yaraan 14 maalmod.
Ma jiraan wax astaamo waafaqsan COVID-19 kuwaas oo ay ku jiraan hunguri xanuun, qufac, ama dhibaatada neefsashada/neef gaabnida.
aan laga helin COVID-19.
Waxaad u safari doontaa meeshaada xigta ee safarka sida waafaqsan qorshayaasha safarka aad aqbashay.
Fadlan sii wad inaad sii eegto geerarka digniinta New Zealand ee COVID-19 oo aad adeecdo shuruud kasta oo kala fogaanshaha jidhka ah, nadaafada gacmaha iyo isticmaalak PPE, marka aad ka tagto xaruna.
Macluumaad badan oo ku saabsan heerarka digniinta waxaa laga heli karaa halkan:
Dareemida inaadan fayo qabin ka dib markaad tagto
Haddii aad qabto wax su’aal ka socod ah ama waydiimo ku saabsan caafimaadkaaga ama ay kaa muuqdaan astaamaha COVID-19, fadlan soo wac Khadka tooska ah 0800 358 5453 ama dhakhtarkaaga.
Wixii xaalad degdeg ah soo wac 111.
Astaamaha COVID-19 waa:
Luminta dareenka urku
Haddii aad dareento inaanad la qabsanayn, waa muhiim inaad kala hadasho xirfad yaqaankaaga caafimaadka. Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah, booqo www.health.govt.nz/covid-19.(external link)
Ka reebida karantiilka la maareeyo
Dowladda New Zealand waxay ahayd nidaamka ka reebida xoogan oo adag si loo ilaaliyo New Zealand ee COVID-19. Shaqadayda waa in laga saaro COVID bulshooyinkeena, oo ma oggolaan karno khatar kasta oo caafimaad oo aan la filayn.
Oggolaanshaha karantiilka la maareeyo keliya waxa ala isticmaalaa duruufo aad u xadidan wixii ah asbaabaha ka reebitaanka iyo halka khatarta caafimaadka dad waynaha lagu qiimeeyo inay aad u hoosayso oo la maarayn karo. Guud ahaan maalinta laga waayo 3 iyo maalinta 12 COVID-19 iyo qiimaynta caafimaad ee buuxdo waa loo baahan yahay si looga fekero codsiga ka reebida. Way adkaan kartaa in la heli kareebida haddii aad ka tagto, ama aad dhawaan joogtay, wadan halka kharataha caafimaadka COVID-19 uu aad u sareeyay.
Hadda waxa ajira afar ka reebitaan noocyada codsiyada laga heli karo nidaamka codsiga onlaynka ah. Rakaabka Safarka ah; Ka reebida Caafimaadl Ku biirida Qof ku jira Karantiilka La maareeyo; iyo Duruufaha Ka reebida. Codsiyada laga fekero qaab xaalad xaalad ah iyo bilowga oggolaanshahu aad ayuu usareeyaa.
Macluumaad badan oo ku saabsan nidaamka kareebida iyo sida loo codsado ka reebida, fadlan booqo:
Haddii lagu siiyo ka reebida inaad ka tagto karantiilka la maareeyo, weli waxaad u baahan doontaa inaad ahmmaystirto ugu yaraan 14 maalmood oo karantiilka ah laga bilaabo wakhtiga aad timaano New Zealand.
Ma jirto ka reebid suuragal ahaan doonto haddii ay kaa muuqato astaamaha COVID-19 muddada joogitaankaaga gudaha karantiilka la maareeyo iyo waxaa loo kaxeeyay hoteelka karantiilka.
Lifaaqa 1: COVID-19 Macluumaadka baadhitaanka
Waa muhiim inaad akhrido ama laguu sharaxo adiga baadhitaanka COVID-19 macluumaadka hoose. La hadal shaqaalaha caafimaadka goobta haddii aad ka qabto wax walaacyo ah.
Waxa dhacaya marka la iga baadho COVID-19?
Waxaa lagu waydiin doonaa inaad buuxiso foomka ama aad ka jawaabto su’aalaha ay ku jiraan faahfaahintaada xidhiidhka.
Waxaa lagaa qaadi doonaa xaga dambe ee sankaag;tani waxay noqon kartaa mid aan raaxo lahayn laakiin lama garanayo inay waxyeelo sababto. Waxay qaadataa wax ka yar daqiiqad si loo soo qaado muunada.
Waa inaad u oggolaato qofka in laga qaado dheecaan garo haddii aad qabto wax xaalado ah ee yareeya awooda maqaarkaaga, waxay saamaysay kartida dhiigaaga si ay u samaysanto xinjir, ama haddii aad qaadato dawooyinka dhiiga khafiifiyo. Haddii aad qabto wax ka mid ah xaaladahan waxay go’aan ka gaadhi karaan inaanay sii wadin baadhitaanka maadaama caafimaadkaagu ytahay walaaca ugu horeeya.
Natiijooyinku waxay qaadan karaan ilaa dhowr maalmood inay soo noqdaan.
Baaritaanka waa lacag la’aan.
Waxaad sii wadi doontaa shuruudaha heerkakarantiilka marka aad sugayso natiijadaada baadhida.
Maxaa dhacay haddii natiijadeydanoqoto ma qabtid?
Haddii natiijadaada cudurka lagaa waayo, waxaa lagugu wargelin doonaa fariin qoraal ah ama wicitaan telefoon, oo ay kuu soo dirayaan kooxda xanaaneynta goobtu.
Haddii baadhitaanku ahaa maalinta 3 waxaad u baahan doontaa inaad sii joogto karantiilka la maareeyo xaga xaruntan.
Haddii baadhitaanku uu ahaa maalinta 12 waxaa sidoo kale lagu sii qiimayn doonaa haddii khatartaadu hoosayso ama aad qabto ama gudbinayso COVID-19 oo aad awoodo inaad ka tagto xarunta marka mudadaada 14 maalmood ay dhammaato.
In baadhitaanka cudur laga waayo waxay la macno tahay in COVID-19 aan la ogaan wakhtiga lagu baadhay. Weli waxay muuqan kartaa mar dambe joogitaankaaga markaas waa muhiim in la sii wado fayo dheer wanaagsan iyo tallaabooyinka karantiilka dhammaan muddada wakhtigaa gudaha karantiilka la maareeyo.
Maxaa dhacaya haddii natiijooyinkayga mid la iga heli karo?
Hadii baadhitaankaaga natiijada laga helay ee rasmiga la xaqiijiyay waxaad laguula soo xidhiidhi doonaa qof ahaan.
Waxaa laguu qaadi karaa xarun kale ama aaga oo waxaa lagaaga baahan doonaa in la karantiimeeyo. Qof kasta oo kale ama xubnaha qoyska aad xidhiidhka la lahayd muddada joogitaankaaga sidoo kale waxay u baahan doonaan in laguu qaado ka warhayn ka dhow.
Waxaad ku jiri doontaa karantiilka ama aaga ugu yaraan 10 maalmood ka dib bilowga astaamaha COVID-19 ama laga bilaabo taariikhda baadhitaankaaga (ku kastaa ha dheeraado) oo waa inay ku cadaadaan astaamaha COVID-19 ee ugu yaraan 72 saacadood ka hor inta aanad ka tegin.
Wadartaada ugu yar ee aad joogto xarunta la maareeyo weli waxay noqon doontaa 14 maalmood.
Waa muhiim inaad ku wargeliso shaqaalaha goobta qof kasta oo xidhiidh dhow la lahaan kara. Shaqaalaha caafimaadka dad waynaha sidoo kale waxay waydiin doonaa cida aad la xidhiidhay dhawaan. Dadkan waxaa la waydiin doonaa inaad joogto karantiilka xaalada ay noqdaan kuwa aan fayoobaan. Dadka aad xidhiidhka lalahayd waxay u baahan doonaan in la karantiimeeyo ilaa 14 maalmood laga bilaabo maalinta u dambaysa ee aad wakhti iyaga la qaadato.
Bal karan haddii aan jiro dareeno marka aan ku jiro xarunta karantiilka la maareyo?
Haddii ay kaamuuqdaan astaamaha COVID-19 (qufac, hunguri xanuun, neef gaabni, san duufka ka daadanayo, waayida dareenka urta, ama qandho) muddada wakhtiga karantiilkaada ama jiro kasta oo kale, waa inaad ku wargelisaa shaqaalaha caafimaadka xaruntaada. Fadlan tan la samee telefoo addoo jooga gurigaag. Waxay ku qiimayn doonaa xaaladaada oo kala hadal tallaabooyinkaaga habboon ee xiga.
Waxa ku dhacay macluumaadka aniga la iga soo ururiyay?
Macluumaadkaaga gaarka ah iyo baadhitaanka waxaa keliya lala wadaagi doonaa wakaaladaha dowladda si toos ah ugu lugta leh maaraynta COVID-19. Waxaanu keliya isticmaali karnaa oo shaacin karnaa macluumaadkaaga gaarka ah haddii ay oggol yihiin sharcigayaga gaar ahaanshaha.
Muddada jawaabta qaranka eemacluumaadka COVID-19 waxaaa isticmaali doono wakaaladaha caafimaadka wixii ah ujeedooyinka maraynta safmarka COVID-19 iyo xogta tirsiga leh ee magaca la qariyo waxaa loo soo daabici karaa qaab dad wayne. Waxaad xaq u leedahay inaad soo gasho oo saxdo macluumaadka adiga lagaa hayo.
Halkeen ka heli karaa talo dheeraad ah?
Wixii ah talada caafimaadka la xidhiidh shaqaalaha caafimaadka ee xarunta aad joogto Waxaad sidoo kale ka wici kartaa Healthline bilaash ahaan 0800 358 5453. Fiiro haar ah, Healthline MA awoodi doontoo inuu helo natiijooyinkaaga.
Macluumaadka guud ee ku saabsan xaalada COVID-19 gudaha New Zealand waxaad booqan kartaa
www.covid19.govt.nz(external link) ama websaydka Wasaarada Caafimaadka www.health.govt.nz(external link).
Lifaaqa 2: Waraysiga Qorshaha Safarka
Waxaa lagu waydiin doonaa wax ku saabsan qorshayaashaada safarka ee marka aad ka tagto xarunta ka dib 14 maalmood xaga Waraysiga Qorshaha Safarka. Waraysigan waxaa uu ka dhici doonaa xarunta gudaha 4 maalmood markaad timaado oo waxaa habbayn doona shaqaalaha goobta.
Waxaad u baahan doontaa inaad diyaarsato macluumaadka soo socda wixii ah Waransigaaga Qorshaha Safarka.
Haddii aad hayso guri ama meel aad degto ka dib muddadaada karantiilka 14 maalmood.
Dhammaystir cinwaanka guriga la degen yahay.
Faahfaahinta sida aad uga safri doonto xarunta karantiilka ilaa gurigaaga/meesha aad degen tahay. Tusaale ahaan ma qaadan kartaa duulimaadka guriga ama miyay xubin qoyska timaadaa si ay guriga kuugu qaado.
Haddii aanad lahayn qorshe gaadiid oo diyaar ah, ogeysiikooxda goobta waxay tahay caawinta aad u baahan doonto inaad tagto gurigaaga ama meesha aad degen tahay.
Shuruudo kasta oo gaar ah ee safarka dhulka ama duulimaadka ee aanu u baahanahay inaanu garano.
Haddii aanad guri lahayn ama meel la dego si aadu tagto ka dib muddada karantiilka 14 maalmood, waxaad u baahan doontaa inaad u sharaxdo duruufahaaga. Tani waxay inaga caawin doontaa wakaalada habboon sida guriyaynta ama daryeelka si uu kuu caawiyo.
Lifaaqa 3: Xuquuqaha sharciga ah
Macluumaadka hoose waxa uu muujiyaa xaquuqdaada sharciga marka aad ku jirto xaunta karantiilka la maareeyo
Waxaa sharcigu kaaga baahan yahay gudaha xaruntan si waafaqsan COVID-19 Jawaabta Caafimaadka Dad waynaha (Xadka Hawada) Amarka 2020 (ama qof kasta oo beddela). Tani waa in laga ilaaliyo dadka New Zealand faafinta ee COVID-19.
Nuqulka amarka sharciga ah waxaa laga heli karaa: www.pco.govt.nz/covid-19-legislation(external link)
Waxaad xaq u leedahay inaad la tasho oo aad tilmaanto qareenka xaga kharashkaaga daahid lahaan. Waxaad xaq u leedahay inaad kula lahadasho qareenkaaga gudaha deegaan qarsoodi ah.
Waxaad la xidhiidhi kartaa qareenka doorashadaada telefoon ahaan oo waxaad xaq u leedahay inaad la xidhiidho qareenka doorashadaada ah. Telefoonka waxaa laga heli karaa qolkaaga oo loo isticmaali karo si loola xidhiidho qareenka.
Waxaanu halkan u joognaa haddii aad qabto dhibaatooyin ama walaacyo
Karantiilka la maareeyo iyo Karantiilka (MIQ) waxay u qaadataa dhammaan cabashooyinka si dhab ah. Waxaanu rumaysanahay in qof kasta uu leeyahay xaqa lagu jeediyo cabasho iyo qof kasta oo ka walaacsan in loo daweeyo si xidhmad leh iyo ixtiraam leh, oo la siiyo dhegaysi buuxda oo xaq ah.
Waxaanu ku ballan qaadanynaa si xaq ah, oo fudud, degdeg ah iyo xal waxtar leh cabashooyinka.
Waxaanu rumaysanahay in baadhitaano kasto inay noqdaan qarsoodi oo ay ku gutaan si daacadnimo ah.
Waxaanu isticmaali doonaa natiijooyinka cabashooyinka sida fursada wax barashada iyo horumarinta nidaamyadayada.
Sida looga jawaab celiyo
Haddii aad hadd aku jirto xarunta MIQ iyo filashooyinkaaga lama buuxin, waxaad marka koowaad la soo qaaday walaacaaga Maareeyaha Xarunta ama Isku duwaha Fayo qabka.
Waxaa jira tiro khabiirada goobta ah kuwaas oo awooda inay wax ka qabtaan arrimo kala duwan ee ay ku jiraan amniga, badbaadada, caafimaadka iyo fayo qabka, iyo taageerada daryeelka. Waa inaad la xidhiidhaa kooxaha goobta ah marka koowaad si looga caawiyo walaacyadaada.
Haddii aan walaacaaga la xalin, waxaad ku soo qaadi kartaa arinkaaga adoo isticmaalayo Foomka Cabashooyinka ee websaydka MIQ. Halkaan ayaa laga heli karaa www.miq.govt.nz/about/contact-us
Waxaad ku samayn kartaa cabashada addoo:
La hadalka Maareeyaha Xarunta Gooba ama Iskuduwaha Fayo qabka gudaha karantiilka la maareeyo iyo xarunta karantiilka.
Ka buuxinta Foomka cabashada websaydka MIQ: www.miq.govt.nz/about/contact-us
MAXAA DHACAYA MARKA XIGTA?
Dhammaan cabashooyinka waxay heli doonta qirista iimaylka ah gudaha labba maalmood oo shaqo oo cabashadooda ah.
Nidaamkayaga baadhitaanka waxaa loo dhammaystiri doonaa sida ugu degdega badan ee suuragalka ah iyo gudaha shan maalmood o oshaqo ka dib qirista iimaylka ah marka la diro, iyadodo cabashada ay ahayd si qanac in midloogu xalilay gudaha mooyaane. Haddii baadhitaanku u baahan yahay wakhti badan, waxaanu la xidhiidhi doonaa wakhtiyada muhiimka ah ee cusub iyo asbaabahooda.
Kooxda Xalalku warqad ayay kuu soo qori doontaa oo ay kuugu sheegayaan go’aanka, muujinta caddaynta looga fekero iyo sababaynta, iyo tallaabo kasta oo loo qaaday sidii natiijada cabashada.
Haddii cabashadaadu ay ku saabsan tahay urur kale ee ku lug leh MIQ, cabashadaada waxaa loo gudbin doonaa ururka la xidhiidha. Tan waxaa ku jira cabashooyinka si aad u habboon ay wax uga qabato Ciidanak Difaaca New Zealand, Wasaarada caafimaadka, Guddida caafimaadka Degmadda, Booliska New Zealand ama dowladda kale ama wakaaladaha shuraakada ee ku lugt aleh maaraynta xarumahayaga.
Haddii aanad ku faraxsanayn xalka cabashadaada
Kooxda Xalinta sidoo kale waxay kugula talinayaan inaad ula sii kacdo arrinta Xafiiska Qareenka dadka u dooda ama Xafiiska Guddoomiyaha Gaar ahaanshaha (sida habboon) haddii aanad ku qanacsanayn nidaamka. Waxaad ka heli kartaa wax badan oo ku saabsan nidaamyadooda hoos:
Lifaaqa 4: ida loo xidho oo la isaga saaro maaskareetiga wejiga si badbaado ah
Xidho maaskareetiga wejiga lagu siiyay dhammaan wakhtiyada marka aad joogto dibada qolkaaga, ama haddii qof u baahdo inuu soo galo qolkaaga wixii ah dayactirka ama nadiifinta. Waa inaad heliya xidhato maaskareetiga wejiga marka – aad u baahan tahay inaad xidhato maaskareetiga cusub ee wejiga wakhti kasta oo aad qolka ka tagto. Haddii ay kaa dhammaadaan maaskareetiga isticmaalka keliya, la xidhiidh shaqaalaha MIQF oo waxay ku siin doonaa adiga wax badan. Ha wadaagin maaskareetigaaga wejiga Isticmaalka dib loo isticmaali karo maaskareetooyinka iyo daboolada kale ee wejiga lama oggola marka aad joogto karatiilka ama xarunta karantiilka.
Xidhashada maasareetiga wejiga:
Ka hor inta aanad gashan daboolka wejiga, dhaq oo qalki gacahaaga ama isticmaal nadiifiyaha gacmaha.
Hubi maaskareetiga wejigaaga.
Hubso inaynadiif tahay, qalan tahay oo aanay waxyeelo gaadhin.
Xidho maaskareetiga wejigaaga.
Saar maaskareetiga wejiga sankaaga, afka iyo gadhka, oo soo geli xadhiga dhegahaaga si meel ay maaskareetiga ugu hayaan.
Beddel maaskareetiga wejiga afar saacadood oo kasta ama wakhti ka horaysa haddii ay noqoto qoyaan, waxyeelo gaadho ama wasakh.
Ku rid maaskateeriyada wejiga daasada qashinka.
Dhaq oo qalaji gacmahaaga ama isticmaal nadifiiyaha gacmaha isticmaalka.
MARKA LA XIDHAN YAHAY MAASKAREETIGA WEJIGA AAD ISKA ILAALIN LAHAYD:
Taabashada xaga hore ee maskareetigaaga.
Dhaqaajinta maaskareetiga wejigaaga.
Tani tilmaanta gaarka ah ee isticmaalka maaskareetiga wejiga karantiilka La maareeyo iyo Xarumaha Karantiilka (MIQF). Waa inaad heliya xidhato maaskareetiga wejiga marka aad u baahan tahay inaad xidhato maaskareetiga cusub ee wejiga wakhti kasta oo aad qolka ka tagto. Waa inaad heliya xidhato maaskareetiga wejiga marka – aad u baahan tahay inaad xidhato maaskareetiga cusub ee wejiga wakhti kasta oo aad qolka ka tagto. Haddii ay kaa dhammaadaan maaskareetiga isticmaalka keliya, la xidhiidh shaqaalaha MIQF oo waxay ku siin doonaa adiga wax badan.
Sida la isaha saaro maaskareetiga wejiga:
Ka hor inta aanad iska bixin maaskareetiga wejigaaga, dhaq oo qalaji gacmahaaga ama isticmaal nadiifiyaha gacmaha.
Ka saar maaskareetiga wejigaaga.
Iska saar maaskareetiga addoo ka siibaya xadhkaha dhegaha.
Dib ha u isticmaalin ama ha isku deyin inaad jeermiska ka disho maaskareetooyinka wejiga ee marka keliya la isticmaalo.
Ka hor inta aadan a bixinin maaskareetiga wejiga, dhaq oo qalki gacmahaaga ama isticmaal nadiifiyaha gacmaha.
Kia ora oo ku soo dhawow guriga!
Hoos waxaa ahaa qayb sharciyada fudud oo aanu waydiisanay adigu inaad raacdo marka aad ku jirto karantiilka la maareeyo.
Sharciyadan waxay ku ilaaliyaan adiga iyo kuwa kale si badbaado ah oo waxay caawiyaan joojintsa faafida COVID-19.
Haddii aad dareento inaadan fayo qabin, joog qolkaaga oo telefoon u dir kooxda caafimaadka goobta. Waxay ku talin doonaan waxa la qaban doono marka xigta.
Xidho maaskareetiga wejiga lagu siiyay dhammaan wakhtiyada marka aad joogto dibada qolkaaga, ama haddii qof u baahdo inuu soo galo qolkaaga wixii ah dayactirka ama nadiifinta.
U jirso 2 mitir
Mar walba joogtey masafada 2 mitir ee kala fogaanta dadka kale laga reebo kuwan ku jira inta adiga ‘kugu xeeran’ (qoyskaaga/lamaanaha).